बाइडेनबाट यात्रा प्रतिबन्ध खारेज, नोभेम्बर ८ देखि अमेरिका आउँदा भ्याक्सिन अनिवार्य, नलगाएकाले के गर्ने ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक कार्यकारी आदेश घोषणा गर्दै विभिन्न देशहरुमाथि लगाइएको कोरोना महामारी सम्बन्धित क्षेत्रीय यात्रा प्रतिबन्ध खारेज गरेका छन् । नोभेम्बर ८ देखि लागु हुने गरी अमेरिका प्रवेश गर्ने विदेशीहरुलाई भ्याक्सिन अनिवार्य बनाइएको राष्ट्रपति बाइडेनले घोषणा गरेका छन् ।
भ्याक्सिन लगाइएको दर १० प्रतिशतभन्दा पनि कम भएका देशका नागरिकहरु र १८ बर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिका लागि भने छुट दिइने भएको छ । अर्थात् उनीहरुले कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्टका आधारमा अमेरिका प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।
पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएका अन्य सबै आप्रवासीहरुले कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने लगायत कोरोना महामारी सम्बन्धित सबै नियमहरुको पालना गर्नुपर्नेछ । अमेरिकी नागरिक, ग्रिनकार्डवाहक र भ्याक्सिनमा छुट पाउने योग्य आप्रवासीहरु लगायत सबै यात्रुहरुले अमेरिका आउनु अगाडि कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
भ्याक्सिन लगाएकाहरुलाईमात्र अमेरिका प्रवेश दिइने नियम नोभेम्बर ८ सुरु हुने बित्तिकै अर्थात् नोभेम्बर ७ को राती १२ बजेपछि लागु हुनेछ । भ्याक्सिन अनिवार्यको नियमले विदेशमा रहेका अमेरिकी कन्सुलेटहरुलाई भिजिटर भिसा जारी गर्नका लागि निषेध गर्दैन । तर भिसाको माग बढ्ने देखिएकाले भिसा अप्वाइन्टमेन्टमा ब्याकलग भने चर्को हुने देखिएको छ ।
हवाई मार्गबाट अमेरिका आउनेहरुका सन्दर्भमा नयाँ नियम लागु हुनेछ । मेक्सिको र क्यानडाको स्थलनाकाबाट अमेरिका आउनेहरुका लागि नयाँ नियम घोषणा गरिनेछ । तर मेक्सिको र क्यानडाबाट हवाईमार्ग हुँदै आउनेहरुका सन्दर्भमा भने यही नियम लागु हुनेछ । विमानमा चढ्नुभन्दा अगाडि नै आप्रवासीहरुले पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएको र तीनदिनभित्र परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकाले जोन्सन एण्ड जोन्सन, फाइजर, मोडेर्ना, आष्ट्राजेनेका, कोभिशिल्ड, भेरोसेल, साइनोभ्याकलाई मान्यता दिनेछ । दुईडोज लगाउनुपर्ने भ्याक्सिनको दोश्रो डोज लगाएको १४ दिन पूरा भएपछि मात्र पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएको मानिनेछ । मिश्रित रुपमा भ्याक्सिन लगाएकाहरुलाई पनि मान्यता दिइनेछ । तर कम्तीमा १७ दिनको अन्तरमा लगाएको हुनुपर्नेछ भने पछिल्लो डोज लगाएको १४ दिन पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
भ्याक्सिन नलगाएकाहरुले के गर्ने ?
भ्याक्सिन नलगाएका अधिकांशलाई अमेरिका आउन दिइनेछैन । तर भ्याक्सिन लगाइएको दर १० प्रतिशतभन्दा पनि कम भएका देशका नागरिकहरु र १८ बर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले भने भ्याक्सिन नलगाएको भएतापनि अमेरिका प्रवेश पाउन सक्नेछन् ।
भ्याक्सिन नलगाएका र अमेरिका आउन छुट दिइएकाहरुले भने अत्यन्तै कडा प्रकारका मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले अमेरिका प्रस्थान गर्नुभन्दा एकदिनभित्रको नेगेटिभ परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ । पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएका अभिभावकसँग यात्रा नगरेका २ देखि १७ बर्षसम्मका यात्रुहरुले समेत एकदिनभित्रको नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै उनीहरुले अमेरिका प्रवेश गरेको ६० दिनभित्र वा सीडीसीले तोकेको समयतालिकाभित्र पूर्णरुपमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेछ । उनीहरुले अमेरिका आएपछि तीनदेखि ५ दिनभित्र कोरोना परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ । अन्यथा सीडीसीले तोकेको क्वारेन्टीनको नियम पालना गर्नुपर्नेछ ।